Tany tsy fahita firy
Fluoride tany tsy fahita firy
Klorida tany tsy fahita firy
Mifikitra foana izahay
Fitaovana mandroso, fiainana tsara kokoa
Amin'izao fotoana izao, isika dia miresaka indrindra amin'ny fitaovana tany tsy fahita firy, fitaovana nano, fitaovana OLED, ary fitaovana mandroso hafa.
Shanghai Xinglu Chemical Technology Co., Ltd dia miorina ao amin'ny foibe ara-toekarena—Shanghai.Mifikitra hatrany amin'ny "fitaovana mandroso, fiainana tsara kokoa" sy ny komity ao amin'ny Fikarohana sy Fampandrosoana ny teknolojia, mba hampiasaina amin'ny fiainana andavanandron'ny olombelona mba hanatsarana ny fiainantsika.
Amin'izao fotoana izao, isika dia miresaka momba ny tany tsy fahita firy, ny fitaovana nano, ny firaka master, ary ny fitaovana mandroso hafa.Ireo fitaovana mandroso ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny simia, fanafody, biolojia, fampisehoana OLED, hazavana OLED, fiarovana ny tontolo iainana, angovo vaovao, sns.
Amin'izao fotoana izao, manana orinasa famokarana roa ao amin'ny faritanin'i Shandong isika.Mandrakotra velaran-tany 30.000 metatra toradroa izy io, ary manana mpiasa maherin’ny 100, ka ny 10 amin’ireo dia injeniera zokiolona.Nanangana tsipika famokarana mety amin'ny fikarohana, fitsapana mpanamory, ary famokarana faobe, ary nanangana laboratoara roa, ary foibe fitsapana iray.Mizaha toetra ny vokatra tsirairay izahay alohan'ny fandefasana mba hahazoana antoka fa manome vokatra tsara ho an'ny mpanjifa izahay.
Miarahaba ny mpanjifa manerana izao tontolo izao izahay hitsidika ny orinasanay ary hanangana fiaraha-miasa tsara!
avy amin'ity fivarotana ity
FIFIDY IZAY VOKATRA ILAINAO
Tianay foana ny hanome ny mpanjifanay amin'ny fividianana tokana, ary koa ny vahaolana amin'ny teknolojia.
Avo Silicon oxide / Silicon dioxide / S...
Nano cerium oxide vovoka CeO2 nanopowder/nanopa...
Varahina Arsenika Master Alloy CuAs30
Aluminum boron master firaka AlB8
99.9% -99.999% tany tsy fahita firy Cerium Oxide CeO2 miaraka amin'ny ...
Nano Al2O3 aluminium Oxide alumina vovoka
Nano silisiôna dioksida vovoka / silica nanopowder ...
Magnesium Mg vovoka
Mianara zavatra bebe kokoa
©Copyright 20102019:Xinglu Chemical All Rights Reserved.
Silika Zro2 Moo3 Nanoparticles Al2o3
Fampiharana ny oxide nano cerium amin'ny polymère
Fitaovana tsy fahita firy tany tsy fahita firy Magnesium ...
Satria ny disadisa teo amin'i Okraina sy Rosia...
Ny hoavin'ny fitrandrahana singa tsy fahita firy ...
Vidio (Ba) metaly Barium 99.9%